article | हिजाब (पर्दा) नै तपाईको पवित्रताको चिन्ह
अमेरिकाकी पूर्व मोडल तथा फिल्म हिरोइन, अमेरिकाकी पूर्वमोडल तथा फिल्म हिरोइन, फिट्नेस इंस्ट्रेक्टर सारा बोक्केरअपनी ऐश–आराम र विलासितापूर्ण जिन्दगीलाई छोडेर इस्लामधर्म स्वीकार गरिन्। बिकनी पहिरिएर आफुलाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्रछु भनेर सोच्ने सारा बोक्केर अब आफै इस्लामी पहिरन ‘हिजाब‘पहिरिन्छिन् र भन्छिन् महिलाको वास्तविक स्वतन्त्रा हिजाब होआधा–अधूरो कपडा पहिरिएर अफ्नो शरिर देखाउनु होइन ! अबउनको विचार पढ्नुहोस् ; सारा बोक्केरले कसरी ठाँट–बाँठकोजिन्दगीलाई छोडेर इस्लामको शरणमा आइन्।
यी सबै हालातबाट बच्न र यसको इलाज खोजीको लागि, मैले बर्षौ लगाए। मैले शान्ति प्राप्त गर्न मनोविज्ञान, किताब र एक्सरसाइज आदिको पनि सहारा लिए। मलाई यसबाट आफ्नो जीवनलाई सही तरीकाबाट शुरू गर्ने शक्ति मिलेन। सुख हासिल गर्नका लागि मैले विभिन्न धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्न शुरू गरें। धर्ममा चासो लिन थाले। मैले ध्यान र योगलाई पनि जान्ने कोशिश गरें। यसमा धेरै आकर्शित हुँदै गए, म चाहन्थे कि मलाई यो स्पष्ट होस् कि मैले के गर्नु पर्छ र कसरी गर्नुपर्छ ? म आफ्नो जिन्दगीको लागि एक तरीका र नियम चाहन्थें तर मैले यस तथाकथित उदारवादी र स्वच्छन्दतावादी माहौलमा यो हासिल गर्न सकिन। यसै बीच अमेरिकामा 2011 सेप्टेम्बर 11 मा आतंकवादी हमला भयो। यस घटना पछि इस्लाम माथि चारैतिरबाट दवाब हुन लाग्यो। इस्लामी मूल्य र संस्कृतिमाथि सवाल उठाउन लागे। वास्तवमा त्यसताका इस्लाम धर्मप्रति मलाई कुनै चासो पनि थिएन। इस्लामलाई लिएर त्यसबेला मेरो धारणा यस्तो थियो कि जहां स्त्रिहरुलाई घरमा कैदी झैं राख्दछन्, पीट्छन् र यो संसारमा जे-जति आतंक मच्चिएको छ त्यसको जड नै मुस्लिमहरु हुन्। यसै बीच म अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धी पनि अध्ययन गर्न लागें। अमेरिकी इतिहास र विदेश मामिला सम्बन्धि नराम्रो नितीलाई पनि थाहा पाए। जातीय भेदभाव र अत्यचारलाई देखेर म काम्न थाले। मेरो दिल टुट्न थाल्यो। संसारको दुःखले मलाई पनि अरुलाई झैं दुःखी बनायो। मैले निर्णय गरें कि संसारको विभिन्न भागमा मानिसहरुमाथि भई रहेको अत्याचारको विरुद्ध मलाई पनि केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। म इन्टरनेटको माध्यम हाई स्कूल र कॉलेजका स्टूडेंट्सलाई मध्यपूर्वका व्यक्तिको साथ अमेरिकाले गरेको अत्यचारको बारेमा जानकारी दिन लागें। यती मात्र होइन स्थानीय कार्यकर्ताहरुलाई साथ लिएर इराक विरुद्ध भएको अमेरिकी युद्ध विरुद्ध प्रदर्शनमा जुट्न लागें। आफ्नो यस मिशनको बीचमा एक अद्भुत व्यक्तिसँग मिले, जो मुसलमान थियो। त्यो पनि इराक युद्धको विरुद्ध प्रदर्शनमा लागेको थियो। यो भन्दा पहिले मैले यस्तो कुनै व्यक्ति कहिले देखेकी थिइन जो आफ्नो मिशन प्रति यसरी ज्यानको बाजी राखेर जुट्नेवाल होस्। त्यो इंसाफ र इंसानी हकको लागि लागि कार्यरत थियो। त्यस व्यक्तिले यस मिशनलाई आफ्नो एक संस्था बनाई राखेको थिए। म पनि उसको संस्थासँग आवद्ध भए। उसको साथ काम गर्ने अवसरमा मैले उसँग इस्लामी सभ्यता, पैगम्बर मुहम्मद सल्ल. र उनको साथिहरुको कयौं जीवनी सुनेकी थिए। यो भन्दा पहिले मैले यिनको बारेमा यस्तो कहिले सुनेको थिइन। यो सुनेर म दंग परें। म यस कुराबाट धेरै प्रभावित भए। म इस्लामबाट प्रभावित भएर यसको अध्ययन गर्न लागे र मैले कुरआन पनि पढें। कुरआनको शैली र अन्दाजले मलाई आफुतर्फ आकर्षण गर्यो। मैले महसूस गरें कि कुरआन मानवकालागि दिल र दिमागमा गहिराईसम्म असर छोड्छ। वास्तवमा जुन सत्यताको मलाई खोजी थियो त्यो मलाई इस्लाम धर्ममा मिल्यो। यसपछि पनि शुरूमा त इस्लाम धर्मलाई लिएर मेरो दिलमा केही गलत विचार उत्पन्न भएको थियो जस्तैः मैले बुझ्न सकेकी थिइन कि आखिर मुस्लिम नारी पूरा शरिर ढाक्छन् ? यो अलग तरहको पोशाक किन लगाउँछन् ? म सोच्ने गर्थे कि म त कहिल्यै यस्तो पोशाक लगाउँदिन। त्यस समय मेरो सोच यस्तो बनेको थियो म त्यस्तै रहन्छु जुन रुपमा मलाई सबैले चिन्छन्, यदि अर्को मानिसले मलाई देख्न नै सकेनन भने त आखिर मेरो अस्तित्व नै कहां बच्छ र ? मलाई लाग्छ, मानिसलाई देखाउनु नै मेरो पहिचान र अस्तित्व हो। यदि अरु मान्छेले मलाई देखेनन् भने त फेरी मेरो अस्तित्व नै कहां रह्यो र ?
जनवरी 2003 को कुरा हो, जाडोको रात थियो। म वाशिंगटन डीसीबाट प्रदर्शन गरेर बसबाट फर्कि रहेकी थिए। म सोच्न लागी, म जिन्दगीलाई कसरी सही रुपमा बिताउन सक्छु, म आफ्नो कार्यप्रति घृणा गर्छु, पतिलाई छोडेर म अलग भएकी थिए, युद्धको विरुद्ध मानिसलाई एकत्र गर्दा नै म थाकी सकेकी थिए,। मेरो उमेर 29 बर्षको थियो तर मैले केही सम्झिन सकेकी थिइन, कि आखिर म के गरौं के नगरौं ? म पूर्ण रुपमा कम्जोर भएकी थिए। म रुन लागें र आफुले आफैलाई प्रश्न गर्न लागें। म राम्रो मान्छे बन्न चाहन्थें र यस संसारलाई पनि राम्रो बनाउने कोशिश गर्न चाहन्थे, तर म सोच्थे, आखिर कसरी समाधान हुन्छ यो सबै ? आखिर मैले के गर्नु पर्छ ? मलाई आफु भित्र यसको जवाब मिल्यो-मुसलमान बनौ। यही हो कामयाबीको मार्ग। मेरो हृदयमा यो जवाब आउँदा मलाई एक अलगै किसिमको आनन्द र खुशीको महशुस हुन्छ। म खुशी र उत्साहबाट प्रफुल्ल हुन्थे। मानौ म माथि शान्तिको चादर छाएको छ। मलाई लाग्यो, मैले आफ्नो जिन्दगीको उदेश्य मिल्यो र जिन्दगी जीउने तरिका पनि। जिन्दगी त जिन्दगी नै हो, यो यति सजिलो पनि छैन, तर मेरो लागि त बाँच्नको लागि अब मार्गदर्शक पुस्तक कुरआन छ। एक हप्ता पछि एउटा मस्जिदको जग बनाउनका लागि मुस्लिम मानिसहरु जम्मा भए । तिनै मुस्लिम मानिसका सामने मैले कलमा ए शहादत पढेर इस्लाम धर्म स्वीकार गरें। मैले स्वीकार गरें कि अल्लाह एउटै नै हुनुहुन्छ, अल्लाह सिवाय वास्तविक सत्य उपासनाका लायक कोही छैन, र मुहम्मद (उनीमाथि शान्ति होस्) अल्लाहको भक्त व रसूल हुन्। त्यहाँ सबै मुस्लिम बहिनीले मलाई गला लगाए। मेरो आँखाबाट खुशी र हर्षको आँशु झर्यो।